Abavelisi beStacker soMbane kunye nabaXhasi | Umzi mveliso wase China wombane weStacker
Isiteki sombane Sicebisa uhlobo olupheleleyo lombane ukuba lusetyenziswe kwindawo yokugcina izinto, kubangele isitaki sombane esipheleleyo kuyo nayiphi na into eshukumayo kunye nokuphakamisa isiseko kumandla ebhetri, abantu banokuyiqhuba eqongeni kwaye balawule yonke. Amandla omzimba kunye ne-chassis, yomelele kwaye yomelele, qinisekisa ukuba ifolokhwe iphatha imithwalo enzima ngokulula.Ukuqhuba kwe-AC ukuphucula uzinzo lokuqhuba kunye nokuthuthuzela.I-beam gantry, uyilo lwesilinda ezimbini, ukuphakamisa okuzinzileyo kunye nombono wokusebenza ngokubanzi. Umda wokuphakamisa izinto zombane kunye noomatshini, ukuphakamisa okuzinzileyo nokukhuselekileyo.
Isitayile sombane China Warehouse Handle Equipment Daxlifter uyilo lwezixhobo zokugcina impahla Kukho i-1000kg kunye ne-1500kg yesikhundla sohlobo lwesibonelelo sokukhetha kodwa ngobude obuhlukeneyo bokuphakamisa.
Isantya esithathu ukwehla, ukucothisa umthwalo opheleleyo, ukukhawuleza ngaphandle komthwalo.Ivalve yokunceda ithintela ukugcwala, ukhuseleko kuqala.Vula isakhiwo sangaphakathi, ubeko olucacileyo lweentambo zokubamba iintambo, kulula ukuzigcina.Ixesha kunye nemitha yombane zibonisa ukusetyenziswa kombane nangaliphi na ixesha Iipedali ezinokusongelwa zinciphisa ukusebenza komqhubi. Uyilo lwecala lokutsala ibhetri lula ukugcinwa kunye nokutshintshwa kwaye kuphucule ukusebenza kakuhle komsebenzi. Ukuphakamisa ukuphakama kwesakhelo somnyango ukukhusela umonakalo kwimoto ephakamayo. Umnatha wokhuseleko ufakwe kwimasti ukukhusela umqhubi ekulimaleni ngengozi.